Hitan’ny Rosiana Ny Tantara Miafin’ny Hofakofaka · Global Voices teny Malagasy
Hitan'ny Rosiana Ny Tantara Miafin'ny Hofakofaka
Voadika ny 23 Febroary 2016 15:00 GMT
Vakio amin'ny teny Français, polski, Español, русский, नेपाली, Română , English
Saripika: Abstract Stories / Vkontakte [tantara saro-takarina]
Misy vondrom-piarahamonina izay ao amin'ny media sosialy rosiana Vkontakte maka sarin'ny harafesenina, hosodoko mihofaka, simba, ka maka sary an-tsaina azy ireny indray ho toy ny “tantara saro-takarina.” Ny mpamorona sy tonia tokana, lehilahy iray antsoina hoe Sergei Vyskub, no nanasa ny rehetra hanatevin-daharana ny vondrona noforoniny sy handefa sary miaraka amin'ny tantara mety ho entiny ao anatiny. “Manana ny tantarany avokoa ny sanganasa tsirairay. Jereo ny manodidina ary lazao ny anao,” izany no lazainy amin'ny mpitsidika ao amin'ny pejy Vkontakte.
Vyskub niteny tamin'ny tranonkala TJournal.ru fa nahazo hevitra hanao ilay tetikasa izy raha nijery saripikan'ireo vatosanga nihofaka mampahatsiahy azy endrika tabilaon'antontanisa. Nanampy azy ny namany hahazoany ireo mpamandrika voalohany, sy nizara “tantara saro-takarina” ao amin'ny vondrona Vkontakte misy azy ireo. Nahazo olona ny hevitra, ary misy fikambanana sasany ao amin'ny habaka manana mpanjohy an-tapitrisany nanomboka nizara ny asany (izay matetika tsy nahazo fankatoavana akory).
Na dia tsy tononina anarana matetika aza ny asan'ny vondrona misy azy, dia nisavoana haingana dia haingana ny lazany. Ny tsanganana voalohany tao amin'ny vondron'i Vyskub dia voamarika datin'ny 9 febroary. Tao anatin'ny roa herinandro monja dia mihoatra ny 16.000 ny mpamandrika. Afa-mamoaka sary na misy na tsy misy tolo-kevitra “tantara” ny mpikambana ary fenoin'ny Vyskub tolotra mbola mila itadiavana heviny ny rakitsary iray.
Tsy ny “Tantara Saro-Takarina” irery no vondrom-piarahamonina natsangan'i Vyskub ao amin'ny VKontakte. Manangana tetikasantsary iray hafa antsoina hoe“Bus Stops,” izay anangonany sarim-piatoan'ny fiara fitaterana manerana an'i Rosia. Nilaza izy fa tsy manampikasana ny hamadika ho fahazoam-bola ireo vondrom-piarahamonina roa ireo (amin'ny famarotana dokambarotra, ohatra). Ireo tetikasa roa ireo dia “asam-pitiavana,” hoy izy tamin'ny TJournal.
Ny ranomasina maty. Saripika: Tantara Saro-Takarina / Vkontakte
Ireo trano manaka-danitr'i St. Petersburg. Saripika: Tantara Saro-Takarina / Vkontakte
Rehefa adinonao ny fametrahana trondro. Saripika: Tantara Saro-Takarina / Vkontakte
[Mitady] mahita an'i Nemo. Saripika: Tantara Saro-Takarina / Vkontakte
“Arahabaina! Nahazo zazalahy ianao.” Saripika: Tantara Saro-Takarina / Vkontakte
Ny sokina anaty zavona. (Filazana sompirana ny sarimiaina sovietikan'i Yuriy Norsheteyn nahazo loka tamin'ny 1975.) Saripika: Tantara Saro-Takarina / Vkontakte
Ny fandefasana balafomanga. Saripika: Tantara Saro-Takarina / Vkontakte
Fonon-rakitsarin'ny “Biby” avy amin'i Pink Floyd. Saripika: Tantara Saro-Takarina / Vkontakte
Eugene ilay Samoina. Saripika: Tantara Saro-Takarina / Vkontakte
Ny fankalazana isan-taonan'ny menavolo ao Ireland. Saripika: Tantara Saro-Takarina / Vkontakte
Raha hijery sary maro hafa avy amin'ny “tantara saro-takarina,” tsidiho ato ny vondrom-piarahamonina Vkontakte misy azy.